Dowladda Jabuuti oo bilaabeyso tallaabo lagu dhex-dhexaadinayao Somalia & Kenya - Awdinle Online
Dowladda Jabuuti oo bilaabeyso tallaabo lagu dhex-dhexaadinayao Somalia & Kenya
Dowladda Jabuuti oo loo xil saaray in ay xal ka keento Khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa sharraxaad ka bixisay tallaabooyinka ugu horreeya ee ay u qaadi doonto arrintaas.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Jabuuti, Maxamuud Cali Yuusuf, ayaa sheegay in dowladdooda ay mas’uuliyad gaar ah ka saaran tahay soo afjaridda xiisadda u haxeysa labada dal ee dariska ah.
Wuxuu sharraxaad ka bixiyay halka ay howsha loo igmaday ka billaabi doonaan.
“Barito waxaa dalka Jabuuti imaan doona wafdi heer sare ah oo isu jira saraakiil ciidan iyo diblomaasiyiin, kuwaasi oo ka imaan doona Soomaaliya, ujeeddada socdaalkoodana waxay ahaan doontaa in la qiimeeyo xaaladda xuduudda Belesxaawo iyo Mandheera. Tani waa howl ay dalka Jabuuti u igmadeen madaxda IGAD,” ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Kenya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta, ayaa maalintii Isniinta ee horaantii isbuucan isku arkay shirkii madaxda urur goboleedka IGAD ee ka dhacay magaalada Jabuuti.
Hoggaamiyeyaasha IGAD oo daneynayay in la dajiyo xiisadda labada waddan ayaa dalbaday in si deg deg ah loogu dhaqaaqo tallaabadaas.
Previous articleMaxay ka wada hadleen Midowga Musharixiinta & Xubnaha Beesha Caalamka?
Next articleFarmaajo oo Warbixin ka dhageystay Guddiyada dib u eegista Dastuurka